Manchester City oo soo saartay bayaan rasmi ah ee ku saabsan dhaawaca John Stones – Gool FM
Manchester City oo soo saartay bayaan rasmi ah ee ku saabsan dhaawaca John Stones
(Manchester) 10 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku shaacisay maanta oo Talaado ah website-keeda Rasmiga ah dhaawaca John Stones iyo inuu seegay tababarka.
Qoraalka rasmiga ah ee kasoo baxay kooxda Manchester City ayaa lagu xaqiijiyay in John Stones uu seegay tababarkii saaka dhacay ka hor kulanka habeen dambe ay naadiga Dinamo Zagreb ku wada ciyaari doonaan tartanka Champions League.
25 jirkan ayuu dhaawac ka soo gaaray inta lagu gudi jiray kulankii Manchester derby ee Sabtidii lasoo dhaafay, kaasoo ku soo dhamaaday 1-2 ay guusha ku raacday kooxda Manchester United.
Bayaanka ay soo saartay kooxda Manchester City ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in John Stones uusan ka qeyb qaadan doonin kulanka Dinamo Zagreb ee habeen dambe Arbacada ah.
Tababare Pep Guardiola ayaa sidoo kale go’aansaday inuu ka saaro Sergio Aguero liiska xiddigaha ka qeyb galaya kulankan, kaasoo wali ka soo kabanaya dhaawac muruqa ah oo soo gaaray intii lagu jiray kulankii ay guusha ka gaareen Chelsea, waxaa intaas u sii dheer maqnaanshiyaha xiddiga reer Spain ee David Silva kaasoo ku maqan go’aan farsamo.
Manchester City ayaa waxay u gudubtay wareega xiga 16-ka ee tartanka Champions League, iyagoo ku hoggaaminaya GROUP C 11 dhibcood, waxaana la filayaa in tababare Pep Guardiola uu ku tiirsanaado ciyaartoy da’ayar ah kulanka habeen dambe.
Ashley Young oo sharaxay sababta uu u diiday inuu ku biiro Liverpool iyo Man City, kahor inta uusan u dhaqaaqin United-ka